HTML निर्यात - पृष्ठ २
प्रकाशनको प्रकार निर्धारण गर्दछ ।
यदि तपाईँ फ्रेमहरू समावेश गर्न, शीर्षक सिर्जना गर्न, वा प्रस्तुतीकरण द्रष्टव्य प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ ।
LibreOffice कोर्नुहोस/LibreOffice इम्प्रेस मेनु फाइल - निर्यात, HTML फाइल प्रकार चयन गर्नुहोस् , विजार्डको पृष्ठ २
निश्चित गरिएको निर्यातका लागि आधारभूत सेटिङहरू परिभाषित गर्दछ ।
मानक HTML ढाँचा
निर्यात पृष्ठहरूबाट मानक HTML पृष्ठहरू सिर्जना गर्दछ ।
फ्रेमहरूसँग मानक HTML
फ्रेमसँगै मानक HTML पृष्ठहरू सिर्जना गर्दछ । निर्यात गरिएको पृष्ठ मुख्य फ्रेममा राखिन्छ, र बायाँपट्टिको फ्रेमले हाइपरलिङ्कको रूपमा विषय सूची प्रदर्शन गर्दछ ।
शीर्षक पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईँको कागजातका लागि शीर्षक पृष्ठ सिर्जना गर्दछ ।
वर्नन् गर्दछ कि तपाईँको द्रष्टव्यहरू पनि प्रदर्शन हुन्छ ।
किवस्क निर्यातको रूपमा पूर्वनिर्धारित HTML प्रस्तुतीकरण सिर्जना गर्दछ, जसमा स्लाईडहरू वर्णन गरिएको समयको परिमाण पछि स्वचालित तरीकाले उन्नत हुन्छ ।
कागजातमा वर्णन गरिएको जस्तै
स्लाईड परिवर्तन समयमा निर्भर गर्दछ जु तपाईँले प्रस्तुतीकरणमा हरेको स्लाईका लागि सेट गर्नु भएको छ । यदि तपाईँले म्यानुअल पृष्ठ परिवर्तन सेट गर्नु भयो भने, HTML प्रस्तुतीकरणले तपाईँको कुञ्जीपाटिबाट कुनै पनि कुञ्जी दवाएर नयाँ पृष्ठको परिचय दिन्छ ।
पृष्ठ परिवर्तन उल्लेख गरिएको समय अवधि व्यतीत भएपछि स्वचालित तरीकाले ठाउँ लिन्दँछ र प्रस्तुतीकरणको सामग्रीहरूमा निर्भर हुदैंन ।
स्लाईड दृश्य समय
हरेक स्लाईड प्रदर्शन गर्नका लागि समयको परिमाण परिभाषित गर्दछ ।
अन्तिम स्लाईड प्रदर्शन भईसकेपछि HTML प्रस्तुतीकरण स्वचालित तरीकाले पुन: सुरु हुन्छ ।
WebCast निर्यातमा, स्वचालित लिपिहरू पर्ल वा ASP समर्थनसँगै उत्पादन हुन्छ । यसले दर्शकको वेब ब्राउजरमा स्लाईडहरू परिवर्तन गर्न स्पिकर (उदाहरणका लागि, स्पिकर इन्टरनेटमा स्लाईड शो प्रयोग गरिने टेलिफोन वार्तालाप हो) सक्षम पार्दछ । तपाईँले पछि यस सेक्सन भित्र WebCast मा धेरै सूचनाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ ।
सक्रिय सर्भर पृष्ठहरू (ASP)
जव तपाईँले ASP विकल्प चयन गर्नुहुन्छ, WebCast निर्यातले ASP पृष्ठहरू सिर्जना गर्दछ । नोट गर्नु होस् कि HTML प्रस्तुतीकरण ASPलाई समर्थन गरी वेब सर्भरद्वारा मात्र प्रदान गर्न सकिन्छ ।
HTML पृष्ठहरू र पर्ल लिपिहरू सिर्जना गर्न WebCast निर्यातद्वारा प्रयोग गरिन्छ ।
स्रोताहरूका लागि URL
प्रस्तुतीकरणका लागि URL
URL (स्वतन्त्र वा सम्बन्धित) वर्णन गर्दछ, जहाँ वेब सर्भरमा सिर्जना गरिएको HTML प्रस्तुतीकरण बचत गरिएको छ ।
पर्ल लिपिहरूकोलागि URL
उत्पादित पर्ल लिपिहरूका लागि URL (स्वतन्त्र वा सम्बन्धित) वर्णन गर्दछ ।
WebCast निर्यातमा अझ धेरै सूचना
WebCast प्रविदि प्रयोग गरी LibreOffice Impress प्रस्तुतीकरणहरूका लागि दुई सम्भाव्य विकल्प छन्: सक्रिय सर्भर पृष्ठहरू (ASP) र पर्ल)
कुनै एउटा केसमा, WebCastलाई लिपि गरिएको रूपमा पर्ल वा ASP प्रदान गरेर HTTP सर्भरको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले, निर्यातित विकल्प HTTP सर्भरले प्रयोग गरेकोमा निर्भर रहन्छ ।
ASP मा WebCast
प्रस्तुतकर्ताले दर्शकद्वारा स्लाईड दृश्य विच परिवर्तनमा प्रविष्टि गरिएको फाइल नाम प्रयोग गर्दछ । तपाईँले WebCast फाइलहरू स्थानिय तरीकाले बचत गर्न सक्नुहुन्छ वा सिधै HTTP सर्भरमा तिनीहरूलाई बचत गर्न सक्नुहुनस् । तपाईँले पछि FTPद्वारा स्थानिय तरीकाले बचत गरिएका फाइलहरू HTTP सर्भर मा बचत गर्न सक्नुहुन्छ । द्रटब्य गर्नुहोस् ती HTTP सर्भरमाथि अनुरोध गरिएको छ भने, मात्र WebCastले काम गर्दछ ।
दुई फरक HTML निर्यातका लागि समान निर्देशिका प्रयोग नगर्नुहोस् ।
HTML निर्यात विजार्डको दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशन गर्ने प्रकार जस्तै WebCast चयन गर्नुहोस् ।
WebCastका लागि विकल्प क्षेत्र भित्र, सक्रिय सर्भर पृष्ठहरू(ASP) विकल्प चयन गर्नुहोस् । तपाईँले अब अन्य सेटिङहरू वर्णन गर् जारी गर्न सक्नुहुन्छ वा सिर्जना गर्नुहोस् वटन क्लिक गरी निर्यात सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।
ASP WebCast प्रयोग गर्दा
निर्यात फाइल HTTP सर्भरबाट पहुँच हुने वित्तिकै तपाईँले WebCast प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
मानौ कि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट इन्टरनेट सूचना सर्भर स्थापना गर्नु भएको छ । IIS सेटअपको बेला HTML प्रतिफल निर्देशिकाको रूपमा तपाईँले "c:\_Inet\_wwwroot\_presentation" निर्देशिका प्रविष्टि गर्नुभयो । तपाईँको कम्प्युटरको URL निम्न अनुसार मानिन्छ: "http://myserver.com".
तपाईँले फाइल बचत गर्नु भईसक्यो जुन c:\_Inet\_wwwroot\_presentation\_ निर्देशिका भित्र निर्यार प्रक्रिया अवधिमा सिर्जना गरिएको थियो । यस निर्देशिका भित्र, निर्यातले HTML फाइल सिर्जना गर्दछ जसलाई उदाहरणका लागि, "secret.htm" नाम दिन सकिन्छ । तपाईँले यो नाम बचत संवाद (माथि हेर्नुहोस्) मा प्रविष्टि गर्नु भएको छ । प्रस्तुतकर्ताले अब जाभास्क्रिप्ट को समर्थन सहित कुनै पनि HTTP ब्राउजर भित्र http://myserver.com/presentation/secret.htm URL प्रविष्टिद्वारा HTML निर्यात फाइलहरू ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ । प्रस्तुतकर्ताले अब केही नियन्त्रणहरू प्रयोग गरेर पृष्ठ परिमार्जन गर्न सक्छ ।
दर्शकले अब URL http://myserver.com/presentation/webcast.asp को माध्यमद्वार प्रस्तुतकर्ताद्वारा चयन गरिएको स्लाईड देख्न सकिन्छ । तिनीहरू यस URLमा फेला परेका अन्य स्लाईडहरूमा सर्न सक्दैन, जब सम्म फाइल नामहरू चिनिएको हँदैन । कृपया पक्का गर्नुहोस कि HTTP सर्भरले निर्दैशीका सूची देखाउँदैन ।
पर्ल माथि WebCast
LibreOffice Impress कागजातमा निर्यात गर्न फाइल - निर्यात रोज्नुहोस् । यसले निर्यात गर्नुहोस् संवाद खोल्दछ, जसमा तपाईँले फाइल प्रकारको रूपमा HTML कागजात चयन गर्नुहोस् । फोल्डर चयन गर्नु भएपछि र फाइल नाम प्रविष्टि गर्नु भएपछि, बचत गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् । यसले HTML निर्यात विजार्ड खोल्दछ । यसले भर्खरै चयन गर्नु भएको फोल्डरमा केही फाइलहरू लेख्दछ ।files to the folder you have just selected.
प्रविष्टि गरिएको फाइलाम स्लाईडको माध्यमद्वारा स्विच गर्न प्रस्तुतकर्ताद्वारा प्रयोग गरिन्छ । कृपया निर्देशिका चयन गर्नुहोस् ।
HTML निर्यातको दोस्रो पृष्ठमा, प्रकाशन प्रकारको रूपमा WebCast चयन गर्नुहोस् ।
WebCastका लागि विकल्प क्षेत्रमा, पर्ल चयन गर्नुहोस् ।
स्रोताहरूका लागि URL पाठ बाकसमा, HTML कागजातको फाइल नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन दर्शकद्वारा प्रयोग गरिनेछ । प्रस्तुतीकरणका लागि URL, निर्देशिकाको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन प्रस्तुतीकरणका लागि प्रयोग हुने छ र, पर्ल लिपिहरूका लागि URL, सि जि आइ लिपि निर्देशिकाका लागि URL प्रविष्ट गर्नुहोस् । तपाईँले अब विजार्डको निम्न पृष्ठहरूमा अरू सेटिङहरूको परिभाषा हिन सक्नुहुन्छ वा सिर्जना गर्नुहोस् वटन क्लिक गरेर निर्यात प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।
पर्ल WebCast प्रयोग गर्दा
फाइल जुन निर्यातको बेला सिर्जना गरिएको छ अब पर्ल सक्षम HTTP सर्भरमा सेटअप गरिन्छ । पर्ल समर्थन भएको विभिन्न एछ टि टि पि सर्भरको कारणले गर्दा यो स्वत: गर्न सकिँदैन । पछि लाग्नु पर्ने चरणले अर्को वर्णन गरिने छ । कृपया तपाईँको सर्भर म्यानुअलसँग सम्मती लिनु होला वा यी चरणहरू तपाईँको सर्भरमा कसरी प्रयोग गरिन्छ आफ्नो सञ्जाल प्रशासकसँग सोध्नुहोस् ।
तपाईँले पहिले फाइलहरू सार्नु पर्दछ जुन HTTP सर्भरमा ठीक निर्देशिकामा निर्यात अवधिमा सिर्जना गरिएको थियो ।
युनिक्स प्रणालीमा फाइलहरू pl विस्तारसँगै HTTP सर्भरद्वारा कार्यान्वयन योग्य अधिकार स्विकार गर्दछ । सामान्यतया, यो chmod आदेश सहित गरिन्छ । currpic.txt फाइलको अधिकार HTTP सर्भरद्वारा लेख्न योग्य बनाउनुपर्छ ।
अब तपाईँ WebCast प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
यस उदाहरणमा, तपाईँसँग HTTP सर्भर सहित लिनक्स कम्प्युटर छ । तपाईँको HTTP सर्भरको URL http://myserver.com हो र तपाईँको HTML कागजातहरूको प्रतिफल निर्देशिका //user/local/http/ निर्देशिका हो । तपाईँको पर्ल लिपिहरू //user/local/http/cgi-bin/ निर्देशिकामा समावेश छ । स्रोताहरूका लागि निर्यात फाइल नामको रूपमा secret.htm र URL को रूपमा URL for listeners. In the URL for presentation text box enter http://myserver.com/presentation/ and for the URL for Perl scripts enter http://myserver.com/cgi-bin/.
अन,सबै *.htm, *.jpg र *.gif फाइलहरू निर्देशिकाहरूबाट प्रतिलिपि बनाउनुहोस् जुन तपाईँको एच टि पि सर्भरमा //user/local/http/presentation/ निर्देशिका भित्र निर्यात अवधिमा वर्णन गरिएको छ र //user/local/http/cgi-bin/ निर्देशिका भित्र सबै फाइलहरू *.pl र *.txt सँगै प्रतिलिपि बनाउनुहोस् ।
रूटको रूपमा तपाईँको सर्भरमा लगइन गर्नुहोस् र //user/local/http/cgi-bin/ निर्देशिकामा स्विच गर्नुहोस् । तपाईँले chmod आदेश प्रयोग गरेर मिल्दो निति वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ ।
एक पटक तपाईँले पर्ल फाइलहरू स्थापना गर्न सकाईसक्नु भयो भने, प्रस्तुतकर्ताले प्रस्तुतीकरण दिन सक्षम हुन्छ । स्रोताहरूले यो प्रस्तुतीकरणURL http://myserver.com/presentation/presentation.htm को अधिनमा हेर्न सकिन्छ ।
Title is: HTML निर्यात - पृष्ठ २